Ogaden News Agency (ONA) – Shirweyinhii OYSU-Waqooyiga Amerika oo si rasmi ah uga furmay Denver Colarodo
Shirweyinhii OYSU-Waqooyiga Amerika oo si rasmi ah uga furmay Denver Colarodo
Posted by ONA Admin	/ July 23, 2011
Waxaa State-ka Denvar Colardo ku sii qulqulaya si aan kala go’lahayn taageerayaasha iyo xubnaha ururka OYSU ee qaarada North America, halkaasoo maalinta jimcaah ah uu si rasmi ah uga furmi doona shirweynihii qaarada waqooyi America ee OYSU.
Shirkan oo ay ka soo qayb galayaan in ka badan 13 State oo uu ka dhisanyahay ururka ama xarumo ku leyahay ururka OYSU-North America ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Colorado jawi farxad leh oo dhalinyarada ay isku marxabaynayaan iyo jaaliyadda oo si fiican ugu soo dhawynaysaa dhalinta halkaa.
Waxaa kaloo shirka marti ku ah wafuud heer sare ah oo uu hogaaminayo Hogaanka arimaha dibada ee JWXO- Mudane C/rahman maadey, hogaanka qorshaynta iyo cilmi baarista jwxo , mudane mohamed nur, iskuduwaha jaaliyaadka north america mudane ahmed majeerteen iyo ku xigeenkiisa mudane ahmed ali yusuf. Waxaa kaloo shirka goob joog ku ah ku xigeenka xoghaya guud ahna afahayeenka OYSU Mudane Shaafi sheikh -shilaabo , xoghaya dhaqaalaha iyo samafalka Marwo rahma ahmed, Xoghaya xidhidhka caalamiga Marwo Najma ahmed oo maal mahan safar shaqo ku joogtay north america.
Waxaa laga dareemayaa magaalada denvar calamada iyo astaanta ururka OYSU oo ay taageerayaasha iyo xubnaha shirka yimid ku la bisanyihin dhamaantood,Xoghaya OYSU ee Denvar ahna
xoghaya arimaha ururka iyo garsoorka north america mudane C/asis shaqalane mar uu saxaafada hadal kooban siinayay wuxu sheegay in shacabka somalida ogadenia iyo jaaliyada ay balan ku qaaden in shirka sidii loogu talagalay u qabsoomi doono isla markaana go,aano wax tar u ah halganka iyo hormarinta OYSU ee north americ ay ka soo bixi doonaan siduu sheegay mudane C/asis shaqlane oo ay ka muuqatay shacuur farxadeed .
Waxaad kala socon doontaan shirweynaha OYSU north america si toos ah saxaafada xorta ah e somalida Ogadenia